Wholesale Spider Prototype 5 Axis Machining CNC Precision Custom Parts Manufacturer and Supplier |Senze
Ny prototype Spider dia vita amin'ny milina 5 Axis.Ny fitaovana dia aluminium.
Inona no serivisy machining CNC 5-axis
5-axis CNC machining dia mamela ampahany sarotra amin'ny lafiny maro endri-javatra mba handamina ny lafiny dimy amin'ny setup tokana.Izany dia afaka mandoa dividends lehibe amin'ny fampiasana milina tsara kokoa, mampihena ny fanamboarana sy ny fotoana tsingerina, ary manatsara ny kalitao.Ny fahaizan'ny machining 5-axis dia hahatonga ny fivarotana machining ho mora kokoa amin'ny asa maro kokoa.
CNC Prototype Machining amin'ny endrika sarotra
Senze dia mahay amin'ny milina CNC marina amin'ny prototypes miasa miaraka amin'ny geometries sarotra, ary manome fanohanana ny fanamarinana ny famolavolanao sy ny fitsapana injeniera.Ohatra, ny ampahany optika amin'ny antsipiriany miompana amin'ny trano fonenana aluminium miaraka amin'ny rafitra sarotra.
Mila mitondra vokatra eny an-tsena haingana kokoa?Ny machining CNC dia manaporofo fa vahaolana maro samihafa amin'ny famokarana kojakoja mahazatra haingana sy mora.Ny ekipanay za-draharaha dia afaka mampitombo ny fahombiazany sy mampihena ny vidin'ny machining amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fitaovana milina sy ny fomba fanao amin'ny milina, ary afaka manome serivisy machining CNC amin'ny volume ambany ho an'ny indostria rehetra.
Tombontsoa amin'ny 5 Axis Machining
* Ny ampahany machining axis 5 dia azo vita amin'ny milina 5 axis tokana, izay mampihena ny fiomanana sy ny fanomanana ny fanamboarana, mamonjy fotoana be.
* Ny geometries sarotra dia azo karakaraina amin'ny fomba mora, ny vokatra avo lenta sy ny fahombiazany dia azo antoka amin'ny fotoana iray ihany.
* Tena tsara ambonin'ny vita dia azo tratrarina, manatsara ny kalitao ankapobeny ny 5 axis CNC faritra.
* Fahaizana miitatra, fahitsiana ambony kokoa, fampivoarana ny vokatra, ary fohy ny fotoana fitarihana
Manatsara ny fepetra fanapahana, mitazona ny fanapahana tsara indrindra, ary mampihena ny fahasimbana amin'ny fitaovana.
Nampiasa machining 5-axis izahay mba hanapahana ny ampahany mitambatra ho an'ny fampiharana isan-karazany, ao anatin'izany ny kojakoja aerospace, ny zanabolana ary ny kojakoja fiara.
Sary antsipirihan'ny sary mampiseho ny Spider Prototype
teo aloha: Tapakila fanodinkodinana vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy
Manaraka: Serivisy Fanamboarana Sheet Metal Machining Metal Parts
High Precision Aluminum Custom CNC 5 Axis Machi ...
Robot Machining Parts Precis Machining Part Parts machining anodized Fizarana Masinina Lathing Custom Kojakojan'ny milina môtô Fizarana milina vy